Slalom Hankook Motul: mbola mitarika hatrany i Tsiory | NewsMada
Slalom Hankook Motul: mbola mitarika hatrany i Tsiory
Notanterahina, ny asabotsy 8 sy omaly alahady 9 septambra, teny amin’ny “circuit Ivato”, ny dingana fahadimy amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, eo amin’ny “slalom”, tohanan’ny Hankook Motul. Nanamafy ny maha loha laharana azy, Rakotomiarana Tsiory, nitondra ny fiara 106, avy amin’ny klioba FMMSAM. Mbola noporofoiny indray ny maha andrarezina azy, tamin’ity. Manana fe-potoana, 3 mn 18, 19 s ny tovolahy. Rabekoto Frederic (Fred), avy amin’ny Asacm kosa ny faharoa. 3 mn 18, 31 s kosa ny nahavitany ny fifaninanana, tamin’ity. Nifampitady tanteraka izy mirahalahy teo amin’ireo dingana telo nifaninanana, saingy tsy nandray ny fiaingana kosa i Fred, teo amin’ny dingana fahatelo farany, nanome tombony ho an’i Tsiory.
Laharana fahatelo, Rajemison Kiady, mpanamory avy amin’ny Asacm hatrany. 3 mn 20, 06 s kosa ny nanatontosany ireo dingana nifaninanana. Tsy nandray ny fiaingana ihany koa ny tovolahy teo amin’ny dingana fahatelo. Manomboka mametraka ny anarany eo amin’ity “slalom”, ity ihany koa, Rasoamaromaka Faniry, avy amin’ny TMF, nitondra ny Citroen C2. Izy no nitana ny laharana fahefatra tamin’ity, rehefa nahatontosa ny fifaninanana tao anatin’ny fe-potoana, 3 mn 21, 01 s.
Teo amin’ny “Cross car” indray, lasan-dRazanamparany Jouvelin (Joujou), avy amin’ny MSA ny fandresena. Tontosany tao anatin’ny 3 mn 29, 97 s ny hazakazakany. Mbola mpanamory avy amin’ny kliobany ihany koa no nanaraka azy, tamin’ny alalan-dRakotoharimanana Hasina (Kash), izay tara 4 mn, taorian’i Joujou. Rabarijoely Mikajy, avy amin’ny ACCT, ny fahatelo, nahavita 3 mn 40, 72 s.